FANDRAISAN’ANDRAIKITRY NY MPAMILY : Mpandeha roa lahy nitondra basy sy fanafody gasy saron’ny zandary
Ny alin’ny alarobia lasa teo, tokony ho tamin’ny 11 ora alina, mpamily taksiborosy mampitohy an’ Antananarivo sy Mahajanga no niantso rehefa nahazo ny laharam-pindain’ny Zandarimaria ao Maevatanàna raha sendra nisakafo teo fa misy amin’ireo mpandeha roa lahy ao anaty fiara nentiny no nandray entana mampiahiahy teny an-dalana. 10 mai 2019
Efa tafahoatra an’i Maevatanàna moa ireo zandary vao azo ny antso ka tany Berivotra 5/5 no natao ny fisakanana mba hisavana ny ao anatin’ilay entana. Tra -tehaka tamin’izay fotoana izay tokoa fa basimborona “calibre 12 marika Robuste” sy basy vita gasy iray miaraka amin’ny bala “Cal 12” ary koa moara, ody gasy marobe no tratra. Rehefa natao ny fanadihadiana dia olona avy any Nanarena Betroka izy ireo ary milaza handeha hamonjy namana any amin’ny Kaominina Andranofasika distrika Ambato-Boeny.
Hita niaraka tamin’ireo ny laharan’ny findain’ilay olona nanafatra izay toerana ipetrahan’ireto farany ao Andranofasika tamin’io fotoana io. Mbola eo am-panaovana fanadihadiana ny mpitandro filaminana avy amin’ny zandarimaria eo anivon’ny vondron-tobim-pileovana Betsiboka hatreto. Manoloana ny fisorohana tanteraka ny fiparitahana fitaovam-piadiana mahery vaika, izany anisan’ny mampirongatra ny lafin’ny tsy fandriampahalemana hatramin’izay dia manentana hatrany ny tsirairay ny zandarimaria mba hanome vaovao raha vao misy mampiahiahy hamongorana ny ratsy. Teto dia noderaina manokana ny fihetsik’ilay mpamily izay sahy nijoro sy nandray andraikitra avy hatrany nampandre ny mpitandro filaminana.